आइतवार, नोभेम्बर 4, 2007 बुधबार, अप्रिल 1, 2015 Douglas Karr
गुगल एनालिटिक्स सँग राम्रो सुविधा छ, तपाईंको साइटमा आन्तरिक खोजीहरू ट्र्याक गर्न क्षमता। यदि तपाईं एक WordPress ब्लग चलाइरहनु भएको छ भने, त्यहाँ गर्न सजिलो तरीका छ गुगल एनालिटिक्स साइट खोज सेट अप गर्नुहोस्:
गुगल विश्लेषकमा तपाईंको साइट छान्नुहोस् र सम्पादन क्लिक गर्नुहोस्।
एउटा दृश्यमा नेभिगेट गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ साइट खोजी सेट अप गर्न चाहानुहुन्छ।
सेटिंग्स हेर्नुहोस् मा क्लिक गर्नुहोस्।
साइट खोजी सेटिंग्स अन्तर्गत, सेट गर्नुहोस् साइट खोज ट्र्याकिंग अन गर्नका लागि।
क्वेरी प्यारामिटर फिल्डमा, शब्द वा शब्दहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन आन्तरिक क्वेरी प्यारामिटर निर्दिष्ट गर्दछ, जस्तै "शब्द, खोज, क्वेरी"। कहिलेकाँही शब्द केवल अक्षर मात्र हुन्छ, जस्तै "s" वा "q"। (WordPress “s” हो) पाँच प्यारामिटरहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, अल्पविरामद्वारा विभाजित।
तपाईको गुगल एनालाइटिक्स क्वेरी प्यारामिटर तपाइँको यूआरएल बाट स्ट्रिप गर्न चाहानुहुन्छ कि हुन्न चयन गर्नुहोस्। यसले केवल तपाईंले प्रदान गर्नुभएको प्यारामिटरहरू स्ट्रिप गर्दछ, र उही यूआरएलमा अन्य कुनै प्यारामिटरहरू गर्दैन।
चयन गर्नुहोस् कि तपाईं कोटीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, जस्तै ड्रप-डाउन मेनूहरू जस्तै साइट खोजी परिष्कृत गर्न।
क्लिक गर्नुहोस् लागू गर्नुहोस्
टैग: गुगल एनालिटिक्स साइट खोजगुगल साइट खोजीसाइट खोजीवर्डप्रेस खोज
सुझावको लागि धन्यबाद, भर्खरै कार्यान्वयन गरिएको!
राम्रो, डग! मलाई थाहा थिएन यो उपलब्ध छ।
अगस्ट 11, 2010 बेलुका 12:05 बजे
टिप को लागी धन्यवाद! मैले यो केहि दिन पहिले स्थापना गरेको थिएँ र खोजी पामको बारेमा अनिश्चित थिएँ र यो किन अझै रिपोर्ट गरिएन भनेर अचम्म लाग्यो। तपाईले दुबै मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुभयो!
जानकारीको लागि राम्रो धन्यवाद, मैले भर्खरै गरें! 🙂
त्यहाँ एक प्लगइन साइटमिटर पनि छ, तपाइँ तपाइँको ब्लगमा कुन कुञ्जी शब्द र कति पटक खोजी गरिएको छ हेर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।